Miiska Kumbuyuutarka Shiinaha YF-GD-001 Soo saare iyo Badeecad | Yifan
Qiimaha EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Cadad (la hadal adeegga macaamiisha)
Tirada Min.Order: 30Pieces
Shuruudaha Bixinta: T / T
ASTAAMAHA 2 khaanadaha,
STYLE Casrigan casriga ah
QIIMEYNTA SHARCIGA 80X50X76CM
SIRTA KU DARAN HAA
DAMMAAN 3 Sannad Xaddidan (degaan), 1 Sano Xaddidan (ganacsi)
Codsiga isha, miiskani wuxuu ku yimaadaa qaabab kala duwan, oo leh warqad madow oo ah qurxin, jilicsan iyo geeso wareegsan miiska sare ilaa lugta miiska.
Waxaa jira 4 cabbir oo aad ku xulan karto: 80x50x75cm, 100x50x75cm, 120x50x75cm, 140x50x75cm si ay ugu habboonaato cabirro kala duwan oo qolka daraasadda ama qolka jiifka ah. hadana waa kufiican yahay guryaha yar yar, dabaqyada ama dabaqyada leh cabirka ugu yar.
Waxyaabaha ku saabsan, waxaan u adeegsanaa MDF tayo sare leh (sabuuradda badhtanka cufnaanta), muraayad muraayad adag leh iyo lug. Taas oo xaqiijin karta xasilloonida iyo adkeysiga. White dhalaalaya sare lacquered lacquered, in si gaar ah waa u fududahay in la nadiifiyo.
White High Gloss Lacquered 2 Khaanadda Shaqada / Miiska Xafiiska ama Home Office.
Miiskan cad waa ikhtiyaar fudud oo shaqeynaya, oo ku siinaya meel dusha sare ah oo laptop, laambad, buugaag iyo sahay ah. Waxaad u isticmaali kartaa miiska qoraalka, miiska waxbarashada, miiska labiska ama miiska dhinaca sariirta jiifka.
Miiskan dhalaalaya oo cad, desktop ballaaran iyo 2 khaanadaha wax lagu kaydiyo, si siman biraha u dulqaad.
Waad abuuri kartaa goobtaada shaqo oo kaamil ah, waad abaabuli kartaa noloshaada, waad ku raaxeysan kartaa shaqadaada, waxaadna ku sameyn kartaa qaab.
Xirmaddu waa mid fidsan, u hoggaansamaya baakadaha dhoofinta ee caadiga ah, waxaan sidoo kale sameyn karnaa xirmooyinka dalabka boostada ee ku saleysan codsadaha iibsadaha.
Qaab casri ah oo casri ah oo leh xaashi madow sida qurxinta
Darajada sare ee MDF, xoog iyo xasilooni
White dhalaalaya sare lacquered
Gees wareegsan, khadad jilicsan
Qalabka tayada wanaagsan: Iskeelka Birta siman
2 khaanadaha kaydinta
Cabbir yar: 80x50x75, 100x50x75cm Cabbirka Dhexdhexaad: 120x50x75cm baaxad weyn: 140x50x75cm
Waxay ku fiican tahay qorista iyo shaqada laptop-ka guri yar, dabaq, dabaqyo.
Hore: 7 khaanado u qoraya miiska kombiyuutarka xafiiska guriga, qolka waxbarashada ee dhallinta. Midab cad iyo geed allaale. Iyada oo leh buug-gacmeed
Xiga: Miiska Kombiyuutarka YF-GD002
Miiska Miiska Kombiyuutarka
Miiska Kombuyuutarka Silver
Miiska Kombuyuutarka Caddaan Iyo Dahab
Miiska Kumbuyuutarka Cad
Shaxda Kombuyuutarka Cad
Miis kumbuyuutar is haysta oo casri ah oo loogu talagalay xafiiska xafiiska wi ...
Miiska casriga ah ee qorista miiska barashada boo ...
Miiska kombuyuutarka qorista fudud iyo midka kooban ...
Miiska kombiyuutarka xafiiska melamine ee cad oo leh 4 ...